Sosialy Archives - Page 106 sur 154 -
Ankadifotsy : Karaoke mampitaraina ny mponina
18/07/2017 admintriatra 0
Tsy sasatra ny maneho fitarainana ny mponina manodidina an’iny faritra Ankadifotsy iny. Karaoke iray no mitabataba aoka izany ka manakorontana ny fiaraha-monina eny an-toerana. Nisokatra tamin’ny 06 Febroary lasa teo izany, ary vazaha nanambady Malagasy …Tohiny
Kaominina Antsirabe : Asa fa tsy kabary
17/07/2017 admintriatra 0
Tanànan’ny rano izay mahasarika olona betsaka sy ny mpizaha tany maro ny tanànan’ Antsirabe. Noho izany dia tsy maintsy tandrovina hatrany ny fahatsaran’ny tanàna. Manana andraikitra lehibe sy goavana amin’ny fitandroana sy fikolokoloana ny tanàna, …Tohiny
Fialan-tsasatra : Betsaka ireo misafidy an’i Toamasina
15/07/2017 admintriatra 0
Ao anatin’ny vanim-potoana maha-betsaka mpiala sasatra amin’izao fotoana izao. Ho an’ny mponina eto an-drenivohitra manana fahefa-mividy manatanteraka izany, zary lasa fahazarana mba tsy hilazana hoe lasa lamaody ny fihazoana ny moron-dranomasina: Toamasina, Mahajanga, Foulpointe. Isan’ny …Tohiny
Trafikana basy : Zandary roa tra-tehaka
14/07/2017 admintriatra 0
Manampahefana roalahy nanao fanamiana sivily, miasa aty Antananarivo sy Arivonimamo, mpanao trafikana basy sy bala no saron’ ny zandary avy ao amin’ny vondro-tobim-paritra Antsinanana ny 11 jolay lasa teo, tamin’ny 11 ora sy sasany alina. …Tohiny